Discalaimer Policy | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
www.visitmyanmar.com.au တွင်ပါရှိသောအချက်အလက်များသည်သာယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဖြစ်၏. သတင်းအချက်အလက်များ www.visitmyanmar.com.au အားဖြင့်ကျနော်တို့ up to date ဖြစ်နေနှင့်မှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များစောင့်ရှောက်ဖို့ကွိုးစားအားထုစဉ်ထောက်ပံ့နေသည်, ကျမတို့ကလည်းဘယ်မျိုးမပါကိုယ်စားပြုသို့မဟုတ်အာမခံလုပ်, ဖော်ပြသို့မဟုတ်ဓိပ်ပာ, ယင်းပြည့်စုံတွေအကြောင်း, ဟုတ်မှန်ရေး, ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, www.visitmyanmar.com.au မှလေးစားမှုသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူသင့်လျော်သောသို့မဟုတ်ရရှိနိုင်မှု, ထုတ်ကုန်, န်ဆောင်မှုများ, မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက် www.visitmyanmar.com.au အပေါ်ပါရှိသောသို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဂရပ်ဖစ်. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်အပေါ်နေရာမဆိုမှီခိုအားထားသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာတင်းကြပ်စွာထို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်မှာတော့ကျနော်တို့ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအပါအဝင်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ပါလိမ့်မည်, သွယ်ဝိုက်သို့မဟုတ်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအရှုံးသို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု, ဒေတာသို့မဟုတ်ထဲကပေါ်ထွက်လာသောအကျိုးအမြတ်ဆုံးရှုံးမှုမှပေါ်ပေါက်သမျှသို့မဟုတ်မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှု, သို့မဟုတ်နှင့် ဆက်စပ်., www.visitmyanmar.com.au ၏အသုံးပြုမှု.
www.visitmyanmar.com.au အားဖြင့်သင်တို့ www.visitmyanmar.com.au များ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်မဟုတ်သောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့လင့်ထားသည်နိုင်ကြသည်. ကျနော်တို့သဘောသဘာဝကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုများ, သူတို့အားက်ဘ်ဆိုက်များ၏အကြောင်းအရာနှင့်ရရှိနိုင်မှု. မည်သည့်လင့်ခ်၏ပါဝင်မှုသေချာပေါက်တစ်ဦးထောက်ခံချက်ဆိုလိုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုအတွင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုအမြင်များထောက်ခံနေခြင်းမဟုတ်ပါ.
တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှု www.visitmyanmar.com.au တက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန် လုပ်. ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးနေသည်. သို့သျောလညျး, www.visitmyanmar.com.au အဘို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်ယူ, နှင့်အဘို့အခံထိုက်ပေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, www.visitmyanmar.com.au ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကျော်လွန်နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စများမှယာယီမရနိုင်ပါဖြစ်ခြင်း.